သိုးမည်းတွေအကြောင်း - Myanmar Professor X - Page 1
Myanmar Professor X
by MPX - 07-23-2020, 07:15 PM
Trade Count: 3
Written by Amiodarone | အခန်း ၁
အချိန်က ၁၉၉၂ ကရင်ပြည်နယ်တောင်တန်းများကြားတွင်အမေရိကန်ထုတ် ပွိုင့် ၂၂ စနိုက်ပါ တစ်လက်ကို လွယ်ထားသူတစ်ယောက်သည် ချမ်အေးလှတဲ့ဆောင်းထုကို ခုခံပြီး တောင်ကြောတစ်နေရာသို့ ချီတက်နေလေသည်။ အချိန်ကမိုးချုပ် နေမင်းကြီး ဝင်နေတဲ့ ညနေမှောင်ပြပြ ၅ ၆ နာရီဝန်းကျင် နေရောင်က မှိန်မှိန်လေးပဲကျန်တော့သည်။ ထိုအချိန်မှာတောင်ကြောပေါ်ကို ကျားကုတ်ကျားခဲတက်နေသူက ကရင်မလေးတစ်ယောက် မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း မျက်ခုံးပါးပါး မျက်တောင်မွှေးကော့ကော့ နှာတန် ခပ်ဆင်းဆင်း နှုတ်ခမ်းထူထူ အသားရည်ဖြူပြီး နှုတ်ခမ်းလေးက သွေးရောင်သန်း နေတဲ့မိန်းကလေး အရပ်က ပုပြတ်ပြတ် ၅ ပေ ဝန်းကျင် ရင်သားက လုံးလုံးကျစ်ကျစ် တင်သားက မာမာကျစ်ကျစ် ခါးက အဆီကင်းပြီး ချပ်ရပ်သောဝမ်းဗိုက်သားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူ မိန်းကလေးပေမယ့် လေ့ကျင့်သား ပြည့်ဝသူ ဟု ပြောရလောက်အောင် သူမ၏ကျစ်လစ်နေသောလက်မောင်းများနှင့်ပေါင်သားများက သက်သေခံနေပါသည်။ ချပ်ရပ်သောဝမ်းဗိုက်မှာ အနည်းငယ်ဖုထစ်နေသော ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား ခပ်ယောင်ယောင်လေးတွေတွေ့မြင်ရသည်။ မြန်မာဖိုက်တင်မင်းသမီးလေး ယဉ်လက်နှင့် လွန်စွာမှတူလှသည်၊ ဤမျှ နုနယ်လှပသောမိန်းကလေးက ဒီလို ကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီးကို နှင်နေတာအကြောင်းရှိပါသည်။ KNU တပ်မဟိုရဲ့အထူးအမိန့်အရ မနေ့ကKNU တပ်မဟာ ၅ ကိုဝင်တိုက်သွားတဲ့ တပ်မ ၆၆ က ခေါင်းဆောင်အရာရှိကို သုတ်သင်ဖို့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရပါတယ်။ အပါးကြီးက (မြန်မာလို အဖေ ကရင်ခေါင်းဆောင် ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်) မှာလိုက်သည်။ ဖုံးမူ(မြန်မာလို သမီး) ဒီကောင်တွေ စောဒါးစေးတို့ စခန်းကို ဝင်တိုက်သွားတယ်။ စောဒါးစေးအပါ တို့ ရဲဘော်တွေအကုန်အသတ်ခံလိုက်ရတယ် ဆေးတပ်သားမလေး နော်ဖောကိုအရှင်ဖမ်းသွားတယ်။ M 16 တွေ RPG တွေ အကုန် အပါးတို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ အပါး လုံးဝ မကျေနပ်ဘူး ဖုံးမူ ကိုတာဝန်တစ်ရပ်ပေးမယ် အပါးပြောပါ။ အပါး သူတို့ ခေါင်းဆောင် ကို အသေလိုချင်တယ် ဖုံးမူ၊ လုပ်နိုင်လား? အပါးစိတ်ကြိုက် ဖြစ်စေရမယ်အပါး။ အပါး ကို ကတိပေးပြီးတာနဲ့ သေနတ်ထုတ်ဖို့ စောမြဲမြဲ ဆီလာခဲ့တယ်။ စောမြဲမြဲ ကမေးသည် နာမည် က နော် ရှဲရှဲ ယူမယ့် လက်နက်က ပွိုင့် ၂၂ စနိုက်ပါ ကျည် ၅၀ ပေးပါ။ နော်ရှဲရှဲ စဉ်းစားတာကို ရပ်လိုက်ပြီး တောင်ထိပ်ရောက်တာနဲ့စနိုက်ပါထုတ်ပြီး ပစ်မှတ်ကိုရှာလိုက်တယ်။ တပ်သား ၂၀၀ ကျော် နီးပါ ရှိသော်လည်း ည၇ နာရီ အချိန်ပင်အိပ်စက်နေကြသည်။ မနေ့က တိုက်ပွဲမှာပင်ပန်းခဲ့ပုံရသည်၊ ကင်းသမား ၄ ယောက်တွေ့ရှိသည်။ ယာယီစခန်းဖြစ်၍ရွက်ဖျင်တဲများထိုးထားသည်၊ ခေါင်းဆောင်ကို ရှာရတာမခက်ပါ အကြီးဆုံးတဲဖြစ်မည်။ အကြီးဆုံးတဲကိုတွေ့သော်လည်း ခေါင်းဆောင်မှာ ထွက်မလာသဖြင့် နော်ရှဲရှဲ အကြပ်ရိုက်နေသည်။ ထိုတဲအနီးတွင်လည်းကင်းသမား ၁ ယောက်ထပ်တွေ့ ရသည်၊ အဝေးက ပစ်ဖို့မလွယ် တဲအနားကို ကပ်မှ ရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး တောင်ကြောမှ အသာလေးဆင်းလာပြီး တဲအနီးကပ်လိုက်သည်။ ကင်းသမား အနားရောက် သည်နှင့် နောက်ကျောပေါ်တက်ခွ၍ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ဝါးကြောနှင့် လည်ပင်းကိုထိုးစိုက်လိုက်သည်၊ အော်ချိန်ပင်မရအသက်ထွက်သွားပြီ၊ တဲအနီးရောက်သောအခါ အသံကြားရ၍အတွင်းသို့ ပေါက်နေသောအပေါက်ဝလေးမှ ချောင်လိုက်မိသည် နော်ရှဲရှဲ အံသြသင့်သွားသည်။ တပ်ရင်းမှူးဟုထင်ရသော အသားမည်းမည်းအရပ်မြင့်မြင့်နှင့် လူထွားကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသည်၊ ပုံမှန်တွေ့ရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ အဝတ်ဗလာနဲ့ ကျွဲတစ်ကောင်လိုသန်မာမဲပြောင်သောပုံဖြစ်နေသည်။ ပိုမိုထူးဆန်းသည်ကသူ့ရဲ့ အတံကြီး မြင်းတစ်ကောင်ရဲ့ တန်ဆာလို ကြီးမားပြီး မဲနက်နေသည်။ သွေးကြောများက နွယ်ပင်များပင်စည်ကို ရစ်ပတ်ထားသလို ဖောင်းကြွနေသည်။ နော်ရှဲရှဲ သေနတ်ကို လွတ်မကျအောင်မနဲကိုင်ထားရသည်။ ရေဆာသလို အာခေါင်တွေခြောက်လာပြီး၊ နို့သီးခေါင်းလေးတွေမာလာသည်။ ပေါင်တံနှစ်ခုကြား က ရွှေကြုပ်မှာ လဲ ရေမြှုပ်တွေထသလို မရိုးမရွတွေဖြစ်လာသည်။ အပျိုမလေး ရင်တွေဖိုပြီး ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဖြစ်နေသည်။ တပ်မှူးက ခြေ တစ်လှမ်းခြင်းနှင့် မွေ့ယာခင်ထားသောနေရာသို့သွားနေသည်။ မွေ့ယာထက်မှာ ကြိုးတုတ်ထာသောအဝတ်ဗလာနဲ့ ကရင်မဖွေးဖွေးလေးတစ်ယောက်ရှိနေသည်။ နော်ရှဲရှဲ ကြည့်နေမိသည် အရှင်ဖမ်းသွားတဲ့ ဆေးတပ်သားမလေး နော်ဖောဖြစ်မည်ဟု ယူဆမိသည်။ တပ်မှူးက ပြောသည်။ ကရင်မလေး ဘယ်လိုလဲ အရမ်းကြိုက်နေပြီလား၊ ငါက အမှုတ်သန်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတွေက တောင်မှုတ်ကြီးလို့ပေးထားတာ။ ဘယ်လိုလဲ လိုချင်နေပြီလား။
ကျမကို လိုးပါတော့ရှင် ကျမမနေနိုင်တော့ဘူး အဖုတ်က တအားယားနေပြီ နော်ရှဲ နားမလည်ဖြစ်သွားသည်။ သူမထင်ထားက မလုပ်ပါနဲ့ လွှတ်ပေးပါ မသာကြီး စသည်ဖြင့် ပြောမည်ထင်ထားသော်လည်း အမြင်နင့်အထင် လွဲနေပြီ။ နောဖော ရဲ့ နို့ လေးတွေ ရဲသည် လည်ပင်းမှာ လည်း အကောင် တစ်ကောင်သွေးစုပ်ထားသလို အရာတွေ သူမ အဖုတ်မှာ များ လှသော အရည်တွေ အဝေး ပင် ရွှဲနေတာကို မြင်နေရသည်။ မနော် (ကရင်လို ညီမ အစ်မကိုခေါ်သည်) ကိုကြီး လိုးမယ်နော်။ လိုးပါ မြန်မြန် ကျမ မခံစားနိုင်တော့ဘူး မလိုးရင်လည်းသတ်ပြစ်ပါတော့၊ သတ်ပါဘူးနှာမြောစရာ၊ ကိုကြီး က လိုးပေးမှာ ကြိုးများကို ဖြေပေးပြီး နောဖော၍နှုတ်ခမ်းများကို လျှာကြီး ထိုးပြီး နမ်းလေသည်။ နောဖော လည်း နမ်းနေရင်း လက်က အလိုလို တပ်မှူး၍လီးကြီးဆီရောက်သွားသည်အားရပါးရကိုင်ကြည့်ရင်း ဂွင်းတိုက်ပေးမိလေသည်။ ကောင်လားကိုင်ကြည့်လို့ ဥတွေပါကိုင်ကြည့်နော် မနော်။ တပ်မှူးက လက်ကို ဥတွေရှိတဲ့နေရာပြောင်းပေးတော့ နောဖော ဥတွေကိုတစ်ယုတယကိုင်မိသည်။ နော် ပေါင်လေးကားလိုက် ကိုကြီးလိုးတော့မယ်။ အင်း ဟု သာ တစ်ခွန်းထဲပြောနိုင်ပြီး ပေါင်နှစ်ခြမ်းကို ကားထားပေးမိတော့သည်။ နော်ဖောကားထားတော့ အဖုတ်လေးရဲ့ ပြဲနေတဲ့နှုတ်ခမ်းသားအလယ်က အစိရဲရဲလေးက ပြူးထွက်လာတယ်။ တပ်မှူးက သူ့ရဲ့လီးကို အရင်းက ကိုင်ပြီး နော်ဖောရဲ့ စောက်စိလေးပေါ်ပွတ်ဆွဲနေလိုက်တယ်။ နော်ဖောတစ်ယောက်လီးနဲ့ ပွတ်ဆွဲခံရတော့ ပြာပုံပေါ်ပြုတ်ကျတဲ့ခါချဉ်ကောင်လေးလို လွန့်လွန့်လူးနေတော့သည်။
ကိုကြီး လိုးတော့ကွာမကောင်းဘူး မုန်းတယ်။ ကရင်မလေးရဲ့ စကားဝဲဝဲနဲ့တောင်းဆိုသံကတပ်မှူးကို ပိုမို၍စိတ်ကြွစေတယ်။ ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာပါ တပ်မှူးက ထပ်၍ သူလီးကြီး ကို အစိလေးပေါ်ကို တစ်ဖတ်ဖတ်မြည်အောင်ခပ်ဆက်ဆက်လေးရိုက်လိုက်သည် ကိုကြီးလိုးပါတော့ ကိုကြီးမလိုးရင်လည်း သေနတ်နဲ့သာပစ်သတ်လိုက်တော့။ နော်ဖောရဲ့တောင်းဆိုသံတွေက တဖြည်းဖြည်းပြင်းထန်လာတယ်။ တပ်မှူးက လည်း စားနေကြ ကြောင်ကြီးဆိုတော့ အထာနပ်တယ်။ မသတ်ရက်ပါဘူး ကိုကြီးက ဟော်လို လိုးမှာ ဆိုပြီးလီးကို ပြွတ်ခနဲ့ ထည့်လိုက်သည်၊ စကားလည်းအဆုံး လီးလည်း အဝင်ဆိုတော့ နော်ဖော တစ်ယောက် အင့် ခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ ကောင်း လိုက် တာ ကိုကြီး ရယ် ဆိမ့်နေတာပဲ ဟု တစ်လုံးခြင်း ညီတွားနေမိသည် တပ်မှူးက နော်ဖော ကို သူမတင်ပပါး ကော့ပေးသော စည်းချက်အတိုင်း အသွင်းအထုတ်ပုံမှန်လေးတင်ပေးလေသည်။ နော်ဖော တစ်ယောက် အရှိန်တက်လာတာနဲ့အမျှ ဖင်သား ကို ပိုပိုကော့ပေးမိလာသည်။ အထာနပ်သောတပ်မှူးက ဆောင်ချက်တွေကို မြန်ပြီး ပြင်းထန်ပေးလိုက်သည်။ ကိုကြီးဆောင့်ဆောင့် နော်ဖော ပြီးတော့မယ် နော်ဖော ရဲ့ပေးချက်များကိုသိနေသော တပ်မှူးက ချိုင်းနှစ်ခု ကြားက လက်ကို လျှိုပြီးပုခုံးကို ကိုင်ကာ ရမ္မက်ပြင်းပြင်းနဲ့ ဆောင့်လိုက်သောအခါ ကိုကြီးပြီးပြီ အား အား အား
နော်ဖောတစ်ယောက်အထွက်အထိပ်ကိုရောက်သွားလေပြီ။ မနော်ကောင်းလား တပ်မှူး၍တစ်ယုတယမေးသံလေးက နော်ဖော ကို အားတွေပြည့်လာစေတယ်။ အပေါက်က နေ လုပ်ကြံဖို့လာတဲ့ နော်ရှဲတစ်ယောက်သူတို့ လိုးနေတာကိုကြည့်ပြီး မိမိ၏ မသိစိတ်နှိုးဆော်ချက်ကြောင့် ဘယ်ဘက်က သေနက်ကိုကိုင်ထားပေးမယ့် ညာလက်က မိမိရင်သားများကို မသိမသာစမ်းမိနေပြီ။ တပ်မှူးက လီး ကို စောက်ဖုတ်ထဲက ခဏထုတ်လိုက်လေသည်။ နော်ဖောက တပ်မှူးမျက်နာကြည့်ပြီး နော်ဖော အဲလို မဆက်ဆံရတာကြာပြီ အရမ်းကောင်းတယ် ကိုကြီး လုပ်တာကြိုက်တယ်။ မနော် နားအုံးလေ ကိုကြီးမပြီးသေးဘူးမလား နော်ဖော ကို ကြီးကို စုပ်ပေးမယ်။ အင်း အင်း နော်ဖောတစ်ယောက် မြင်းလီးတမျှကြီးမားလှတဲ့ တပ်မှူးလီးကြီးကို သူမ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေနဲ့ နမ်းပြီးစုပ်ပေးနေသည် ကို နော်ရှဲတစ်ယောက်နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေသည်။ မိမိတို့ ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက စစ်သားများကို မုန်းတတ်အောင် အပါး တို့ ဖထီး တို့က သင်ပေးခဲ့ကြသည်။ အခုတော့ သူတို့ ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ စစ်သားလီးကို သူမရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တစ်ယောက်က တစ်ယုတယစုပ်ပေးနေသည်မှာမယုံနိုင်စရာပင်ဖြစ်နေသည်။ အမှန်အတိုင်း ပြောရလျှင် နော်ရှဲတစ်ယောက် နော်ဖောကို မနာလိုပင်ဖြစ်လာသည်။ သူမကိုယ်တိုင် လည်း ဖိုမဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံရှိဘူးသူဖြစ်သည်။ သမီးရည်းစားချစ်ကြိုက်၍ နှစ်ခါခန့်တွေ့ကြုံဘူးသော်လည်း ဒီလိုမဟုတ် အပေါ်ကနေ တက်လုပ် ချစ်သူက ခနလေး နဲ့ပြီးသွားသည် သူမက ဘာမှန်းမသိကျန်နေခဲ့ သာ ဖြစ်သည်။ အခုတော့ နော်ဖော မှာ ကာမအရသာကို အပြည့်အဝခံစားနေရသည်ကိုကြည့်၍မိမိသာ ဖြစ်လိုက်ရင်ဆိုပြီးစိတ်ကူးမိနေသည်။ နော်ဖော်က လီးတစ်ချောင်းလုံးသာမက ဥများကိုပါ တစ်လုံးချင်း စုပ်ပေးနေ၍မိမိ တတ်သမျှပညာအားလုံး အိတ်သွန်ဖာမှောက်ချပြနေလေသည်။ လီးတန်ရှိ သုတ်ထွက်ပေါက်လေးကို ဖြဲပြီး လျှာဖျားနဲ့ ကျီစား ပုံ က အသည်းယားစရာဖြစ်နေသည်။ လီး ထိပ်ဖူး နှင့် အရည်ပြားဆက်ဆက်နေသော အောက်ဖက်အပိုင်းကို အောက်ခြေမှထိပ်ဖူးထိ လျှာနဲ့ ကလေး ငယ်လေး ရေခဲချောင်းလျက်သလို လျက်နေလေသည်။ တပ်မှူးတစ်ယောက် နွားကြီးတစ်ကောင်လိုသန်မာပေမယ့် နော်ဖောရဲ့ ပြုစုမှုကြောင့် ငါးရံတစ်ကောင်လို ဖျက်ဖျက်လူးနေလေသည်။ မနော် ကိုကြီးတို့ ထပ်ချစ်ရအောင် လေးဘက်ကုန်းပေးပါလား တပ်မှူးစကားလုံးများက နော်ဖောကို စပါးကြီးမြွေစိတ်ညို့နေသလို ပင် နော်ဖော တစ်ယောက် ဖင်ပူးတောင်းလေးထောင်၍ကုန်းပေးနေမိသည်။ တပ်မှူးက ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ နောဖောရဲ့ တင်သားဖြူဖြူလေးကို ခပ်စပ်စပ်လေး ရိုက်လိုက်လေသည်။ ဖြောင်း အား နောဖော အော်မိသည် နာ လို့ မဟုတ် မိမိ၏ရွှေကြုတ်လေး တုန်ခါသွား၍ တစ်ခုခု တောင်းတမိသွား၍ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တပ်မှုး က အဖုတ်အဝကို လီးထိပ်နဲ့ အရင်တည့်လိုက်သည် ထိပ်ဖူး က အဖုတ်လေးထဲနှစ်မြုပ်သွားချိန်မှာ နော်ဖော၏နို့ နှစ်လုံးလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီး ဆုပ်နယ်ကာ လီးတစ်ချောင်းလုံးဖိသွင်းလိုက်သည်။ အား အင်း အီး ကောင်းလိုက်တာ ပြည့်ကြပ်နေတာပဲ သူမ အရမ်းကို ပြည့်ဝသွားသလိုခံစားလိုက်ရပါသည်။ သူမ တင်ပါးများက နောက် ကို အလိုလိုပေးနေမိသည်။ တပ်မှုး က လည်း ရေလိုက်ငါးလိုက် ဆောင့်ပေးလေသည်။ ဆောင့်ချက်များကတစ်ဖြည်းဖြည်းမြန်လာပြီး နို့နှစ်လုံးကိုလွှတ်၍ခါးကို ကိုင်ကာ အညှာအတာကင်းမဲ့စွာဆောင့်လေသည်။ အား အား အား ဆောင့်ပါ ကို ကြီး တအားကောင်းတာပဲ ကောင်းလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်လေး စည်းပိုင်နေတာပဲ နှစ်ယောက်သား က အရသာ ကိုယ်စီယူ ရင်း မောင်းနှင်နေကြကာ ပန်းတိုင် အနီးတွင် နောဖော ပြီးတော့ မယ် ကိုကြီး ကိုကြီးလည်း ပြီးတော့မယ် အားအား ပြီးပြီ။
နှစ်ဦးသား ပန်းတိုင်ကို အတူတကွ ရောက်လှမ်းပြီး တပ်မှူး၍သုတ်များက နောဖောအဖုတ်ထဲက နေ လျှံ၍ပင်ထွက်ကျလာသည်။ ကာမ တိုက်ပွဲဆင်နွဲသူနှစ်ဦးလုံးစစ်ပန်း၍ မောဟိုက်သွားကြသည် မနောကို ရေယူပေးမယ် ခဏနော်။ တပ်မှူး က မိမိ ရေဘူးကိုရေသွားယူရာတွင် တဖက်မှာချောင်းနေတဲ့ နော်ရှဲရှဲကို သတိထားမိသွားသည်။ ဟာ ရန်သူ တပ်မှူးသတိထားမိ၍ပစ်စတို လှမ်းယူသော်လည်းဖျတ်လက်သော နော်ရှဲ က အရင်ဦး၍ပစ်လိုက်သည်။ ဒိန်း တပ်မှူးလဲကျသွားသည် တဲထဲကို နော်ရှဲလျင်မြန်စွာဝင်လာပြီး နော်ဖော လာသွားမယ် နော်ဖောလည်း ရုတ်တရက် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေ၍အဝတ်ဗလာနဲ့ လိုက်သွားမိသည်။ သေနတ်သံကြား၍ တပ်သားတစ်ချို့နိုးပြီးမိမိရှိရာလာနေပြီဟုမှန်းဆမိ၍ နော်ရှဲတစ်ယောက် နော်ဖောကို ခေါ်ကာ ပြေး လေသည် နော်ရှဲပြေးနေချိန်တွင် နောက်မှ ဂျီ3သေနတ်သံကြားလိုက်ရသည်။ ကျည်ဆန်က နောဖော ကို ထိုးဖောက်သွားလေပြီ။ နော်ရှဲ ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘဲ တောအုပ်ထဲကို ပြေးလေသည်။ တောကျွမ်းမှု လျင်မြန်မှုနှင့် လိမ္မာပါးနပ်သော နော်ရှဲကို စစ်သားများမျက်ခြေပျက်သွားသည်။ နော်ရှဲရွာကို မလွယ်လမ်းများမှတဆင့် စစ်တပ်မှခြေရာမခံနိုင်အောင် သတိထားပြီးပြန်လာခဲ့သည်။ ည မှောင်နေ၍ အလင်း မရှိသော လမိုက်ည ဖြစ်သဖြင့် တောင်ကြားတွင်ရှိသော ဂူ တစ်ခုတွင် အိပ်စက်၍ မနက်မှ သာရွာပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ခရီးနှင်ရ၍ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသော်လည်း နောဖောနှင့် တပ်မှူး၏လိုးပုံများကို မြင်ယောင်နေ၍အိပ်မရဖြစ်နေသည်။ အတော်ကြာမှအိပ်ပျော်သွားသည်။
You need to login in order to view replies.
Forum Jump: Private Messages User Control Panel Who's Online Search Forum Home Forum -- Announcements, News & Information ---- Feedback & Suggestions ---- Site Updates & Changes ---- News ---- Member of The Month -- Support ---- Move! ---- Ask Staff ---- Award Requests ---- Appeals -- Tutorials -- Archive General Discussions -- The Lounge -- Gaming -- Entertainment ---- Movies, Series and TV ---- Music ---- Anime and Manga ---- Games -- Introductions -- Member Contests & Giveaways -- Milestones & Achievements -- Another point of view -- News around the World ---- Internet & Tech ---- Real Life -- Other Discussions ---- Forum Games ---- News and Happenings Country -- Myanmar -- Thailand -- Vietnam -- Germany -- Chinese -- Japan Channel -- Asian Sex Diary -- Property Sex -- Public Agent -- Brazzers -- Blacked -- Fake Taxi -- MILF.com Pornographic -- Hentai / Anime -- Premium -- Images -- BDSM -- Gif Reading -- Comic -- Ebooks -- Manga -- Novel Parties & Events -- Events -- Parties Market Place -- Marketplace discussions -- Sellers Marketplace -- For Men ---- Dolls ---- Vibrator ---- Medicine -- For Women ---- Dolls ---- Vibrator ---- Medicine -- Webmaster ---- Hosting ---- Domains -- Graphics -- Services -- Currency Exchange -- Credits High as Fuck! -- High Satff -- Fuck Human
Website Up or Down!
Myanmar Profess X (MPX) is one of Leading Adult Forum from Myanmar and Be Develop for Sex Education and Entertainment purpose and want to share some pornographic to People :)
Enjoy! Your Adult life.
Follow mmProfessX on Facebook
Follow mmProfessX on Instagram
Follow mmProfessX on Twitter
Follow mmProfessX on Linkedin
Join mmProfessX on Discord
Copyright © 2019-2021. MyBB